3D nekusimbisa, nebefu Decking
Yakajairwa Wall Cladding
3D Mabhuku eBraille Wall Cladding
Co-Extrusion Wall Kurongedza
WPC DIY Kuratidzira
WPC Bindu Series
WPC Bindu Bench Paneli
WPC Ruva Pot
Maitiro Ekucheka & Kurumidza Kuomesa Dhizaini
ne admin pane 21-07-13
Sezvo mufananidzo wekumusoro unoratidzwa, pamwe nharaunda yako yakafanana neiyi, haina kugadzikana uye iwe unoda kuigadzira ine yakasarudzika sitaira Asi WPC yekushongedza fekitori yaigara ichikuudza kuti ivo vanongogadzira imwechete kana maviri saizi uye kureba zvigadzirwa. izvi, iwe unogona kufunga ...
Mamwe Matipi Nezve WPC
ne admin pane 21-07-06
Wood zvigadzirwa zvepurasitiki zvinoumbwa (WPC) zvigadzirwa zvinonakidzwa nezvakanaka zvese zviri zviviri huni uye polymer zvinhu, asi hazvibhadharwe nekukanganisa kwavo.WPC zvinhu zvine simba rakakwirira, zvinodzivirira kuora, mamiriro ekunze kusagadzikana, kutsvedza kuramba.Inogona kushandiswa mukumisikidzwa, gadheni, dzimba. uye mumwe wekunze chikuva.Nemurume akadaro ...
Inogona WPC decking kuvezwa?
ne admin pane 21-06-09
WPC decking ipfupi kune huni mapurasitiki uye anoumbwa nekugadzirwa, inowedzera uye inozivikanwa pasi rese.Ukatitsanangura iyo yemhando yepamusoro, isu tinogara tichiti WPC decking hapana pendi, hapana glue, yakaderera kugadzirisa Saka ipapo mumwe munhu anozovhiringidza izvo inogona iyo WPC yekucheka mabhodhi kunge akapendwa?
Chenesa uye Kuchengetedza iyo WPC decking
WPC decking ine mikana yakawanda pamusoro pechinyakare hardwood flooring uye iko zvino yave kuramba ichiwedzera kufarirwa.But hapana chinoumbwa WPC decking ndeye 100% yekuchengetedza mahara.Kana iri kushandiswa, ichiri kuda yakawanda yekugara kugadzirirwa kuwedzera hupenyu hwebasa, asi kugadzirisa Zvakareruka Uye zvakare mabara pane ...
Iyo Yekuisa Nongedzo YeWPC Wall Cladding
ne admin pane 21-05-31
WPC ipfupi nehuni mapurasitiki uye inoumbwa, ndeyemamiriro ekunze kusagadzikana, isina mvura, kudzivirira tupukanana uye kushoma kuchengetedza.Nekuda kweakawanda kugona kwakanaka, vanhu vazhinji uye vazhinji vachazosarudza WPC madziro emadziro ekushongedza madziro avo. Saka pamwe mumwe mutengi anozovhiringidza nezve kuisirwa, neiyo inst ...
Maitiro Ekuisa WPC Decking?
WPC Decking inonakidzwa nezvakanakira zvese zviri zviviri huni uye polymer zvinhu, asi zvakasununguka kubva kune zvavanokanganisa.So composite decking inozivikanwa mune rese pasirese.Pamwe iwe uchave unonetsekana nezve iyo yekuisa, usazvidya moyo nezvayo. nyore kuisa ...
Chii chinonzi co-extrusion?
ne admin pane 20-12-03
Co-extrusion, tekinoroji yazvino muhuni inoumbwa nemhando, iyi yepamusoro cap tekinoroji yakabatanidzwa kune moyo wepakati, yayo yakafukidzwa pamusoro pezvinhu ndiyo inopa rimwe nerimwe bhodhi rakasarudzika uye repamusoro kuita.Iyo inoputira zvivakwa zve cap inogadzira co-extrusion bhodhi yakanyatsogadzikana, pamusoro haizokura uye ...
Chii chinonzi 3D embossed Series?
Lihua WPC 3D Embossed Composite Decking ndiyo nyowani tekinoroji yekugadzira chigadzirwa, kana iwe unogona kuidana yakadzika embossed kana super embossed. Iyo huru tekinoroji ndiyo yakadzika yakadhirowewa maitiro panguva yekugadzira.When iyo extrusion yapera, iyo pateni ndiyo imwe yepamusoro pemabhodhi. New zvemichina 3D nekusimbisa, nebefu ...
Chii chinonzi WPC dzakateedzana?
WPC ishoma yehuni epurasitiki inoumbwa, chinhu chikuru PE uye huni fiber. yakanaka, yakanaka kuona ...
Kwete 46 yemugwagwa weBaishijian,
langxi maindasitiri nzvimbo,
Email: alice@lisenwpc.com Mhere: 0086-0563-3830116 Nhare mbozha: 0086-13635632626
Inowanikwa yeWhatsApp uye Wechat
© Copyright - 2021-2025: Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
WPC rinoumba decking, Kunze WPC decking, WPC uriri, WPC yekunze decking, huni mapurasitiki ematongerwo decking, WPC decking uriri,